Inona ireo tranokalan'ny PR izay afaka manampy anao hanangana rindran-damba?
Na eo aza ny fanovana algorithm tsy miovaova, ny lohamilina dia mijanona ho ilaina indrindra ho an'ny tranonkala. Mbola ilaina ihany ny mamorona rindranoka amin'ny tranokalan'ny PR mba hampiroboroboana ny toerana misy anao sy hanamafisana ny fanatrehanao ao amin'ny tranonkala. Amin'izao fotoana izao, ny algorithma amin'ny alàlan'ny Google dia manompo tsotra - ny avo kokoa ny isan'ny backlinks kalitao manondro ny tranonkalanao, ny mahaliana kokoa ny pejy Internet anao.
Na izany aza, mila paikady ianao mba tsy hanatsara ny tranokalan'ny fikarohana. Manampy amin'ny fampivoarana ny fanentanana ny marika izy ireo ary mitondra fifamoivoizana ara-boajanahary avy amin'ireo tranonkala tena manan-danja.
Raha te hanana rohy fampifandraisana tsara ianao, dia tsy mila miasa mafy fotsiny mba hamoronana rohy vao tafiditra ao amin'ny tranokalanao, fa koa manara-maso ireo rohy izay raranao ampiasaina mba hitadiavana sy hanesorana ireo rohy izay mety hanimba ny orinasanao.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba hahitana tranokala avo lenta amin'ny fananganana backlinks dofollow any. Ankoatra izany, dia handinika ny fomba hamoronana profesora mpandresy isika ary hanaisotra rohy mampidi-doza avy amin'izany.
Ahoana no hahazoana rindran-kira ambony PR ho an'ny tranokalanao?
Mila manomboka amin'ny fijerena ireo loharanom-pizarazaran'ny mpifaninana ianao. Ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fametrahana ny rohy amin'ny taranaka dia ny mikaroka ny tranonkala ho an'ny teny fanalahidy tianao hotandremana ary hijery hoe iza amin'ireo tranonkala no ambony indrindra.
Mba hijerena ireo toerana ambony indrindra ho an'ny mpifaninana amin'ny tsena manokana, dia azonao ampiasaina amin'ny Semalt Web Analyzer. Raha vao mahita loharanom-pejy avo lenta momba ny rohy ianao, mila manandrana manamboatra ireo rohy ireo ianao ary mahazo izany fifamoivoizana sarobidy izany ao amin'ny tranokalanao.
Amin'ny ankapobeny, ny rindran-tsavily tsara dia avy amin'ny kalitao sy vokatra na serivisina voamarina. Izany no antony tokony hampandrosoana ny orinasanao amin'ny tambajotra sosialy ary hampitombo ny isan'ny tsy mivadika amin'ny mpampiasa marika anao. Amin'ny fampiasana rindrambaiko maodina manokana, azonao atao ny manamarina ny filazanao ny marikao amin'ny media sosialy ary manolo ireo fanamarihana ireo amin'ny backlinks.
Amin'ny ankapobeny, ny rindran-damina dia maneho ny herin'ny vohikala sy ny indostrian'ny laza. Izany no antony mahatonga anao hiresaka momba anao sy hampifandraisanao amin'ny tranokalanao, raha manome ny vokatra mety amin'ny mpanjifa amin'ny vokatra sy ny serivisy ianao.Vokatr'izany dia hahazo karazana fako organika sy fananana marika tsara ianao.
Ahoana no hitantanana ny lazanao amin'ny Internet?
Raha te hanana fifamoivoizana tsy tapaka ianao ary mitondra fitarihana, dia mila mitantana ny lazanao an-tserasera ianao. Raha misy fanehoan-kevitra ratsy momba ny raharaham-barotrao ao amin'ny tranonkala, dia mametra fotoana sy ezaka amin'ny fametrahana ny mpanjifanao ianao fa tsy miezaka ny manala io tsikera ratsy io. Mila mamaly ireo fanamarihana ratsy rehetra ianao ary mahita izay tsy mety. Raha misy olana amin'ny lafiny anao, dia mila manatsara izany ianao ary manome mpanjifa manana fihenam-bidy na fanonerana.
Mandritra ny fitsipika, ny mpanjifa tsy mahafa-po dia manova ny sainy avy eo ary mamerina mandinika ny hevitrao, mizara izay nataonao sy mamadika toe-javatra ratsy ho tsara kokoa.
Izany no antony ilanao miasa mafy mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa fa tsy manangana rohy. Ny tsy fivadihana amin'ny mpampiasa marika anao kokoa, ireo backlinks kalitao kokoa azonao azonao Source .